गर्भावस्था बीमा: यो के हो, र यसको लागत कति छ? - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय कम्पनी, समाचार प्रेस घरपालुवा जनावर औषधि बनाम मित्र कल्याण मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> कम्पनी >> Essential आवश्यक बीमा प्रश्नहरू गर्भावस्थामा सोध्नु
Essential आवश्यक बीमा प्रश्नहरू गर्भावस्थामा सोध्नु
सामना गरौ। बच्चा जन्माउँदा मोटो मूल्य ट्याग आउँछ। यसको मतलब, गर्भावस्थाको लागि तयारी गर्न तपाईंको डाक्टरलाई भेट्न केवल एक यात्रा भन्दा बढि आवश्यक पर्दछ। तपाईको स्वास्थ्य लाभलाई अधिकतम बनाउन र तपाईको खर्च न्यूनीकरण गर्न तपाईले आफ्नो पनि हेर्नु पर्छ स्वास्थ्य बिमा विशेष गरी गर्भावस्था बीमा कभरेज।
यदि सम्भव छ भने अगाडि योजना बनाउनुहोस्। यसले तपाईंलाई तपाईंको कभरेज विकल्पहरू अनुसन्धान गर्न र तपाईंको आवश्यकताहरू मिल्दो योजना छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। त्यो भनियो, कहिलेकाँही गर्भावस्था सही समयमा हुँदैन। शुभ समाचार यो छ कि तपाईंसँग प्रसवपूर्व हेरचाहको विकल्पहरू छन्, यदि तपाईं बीमा हुनुहुन्न भने पनि।
तपाईंको अवस्था जस्तोसुकै भए पनि, तपाईंसँग मातृत्व बीमा र स्वास्थ्य हेरचाहको बारेमा धेरै प्रश्नहरू छन्। तपाईंलाई सुरू गर्न मद्दतको लागि, यहाँ तीन विशेष प्रश्नहरू छन् जब तपाईले आशा गरिरहनु भएको छ बिमा प्रदायकलाई सोध्नुहोस्।
गर्भावस्था बीमा कभर गर्छ?
गर्भावस्था बीमा जन्मपूर्व हेरचाह सम्बन्धित सबै आवश्यक स्वास्थ्य लाभहरू कभर गर्दछ। यसमा जन्मपूर्व भ्रमणहरू, प्रिस्क्रिप्सन ड्रग्स, प्रयोगशाला सेवाहरू, गर्भकालीन मधुमेह, वितरण लागत, र अन्य मातृत्व हेरचाह आवश्यकहरू समावेश हुन सक्दछ। यसले नवजात हेरचाह पनि समाहित गर्दछ। खुला भर्ना समयमा बीमा विकल्प मूल्याङ्कन वा आफ्नो स्वास्थ्य योजना, बाहिर-को-खल्ती खर्च, copays, deductibles र coinsurance प्रसूति कवरेज सम्बन्धित मा नजर समीक्षा गर्दा।
प्रसूति हेरचाहलाई सस्तो देखभाल ऐन (एसीए) को रूपमा वर्गीकृत गरिएकोले आवश्यक स्वास्थ्य लाभहरू , जब सम्म तपाईं एसीए अन्तर्गत योग्य एक योजना किन्नुहुन्छ, तपाईं गर्भावस्था कभरेज हुनेछ। यसमा स्वास्थ्य बीमा मार्केटप्लेस र मेडिकेड योजनाहरू , जसले तपाईंको गर्भावस्था कभरेज सुरु हुनुभन्दा अघि सुरु भएमा कभर हेरचाह गर्दछ।
त्योले भन्यो, लुइस नोरिस , विलिङ्गटन, Colo। बाहिर एक लाइसेन्स स्वास्थ्य बीमा एजेन्ट, प्रत्येक राज्य समेटिएका के को सही विवरण बेन्चमार्क को विशेष फरक गर्न सक्ने बताउँछन्। त्यसोभए, तपाईंको योजनाले कसरी काम गर्छ भनेर विवरणहरू बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। थप रूपमा, नियोक्ता द्वारा प्रदान गरिएको कभरेज, या त आमा वा पार्टनर मार्फत, गर्भावस्था कभरेज प्रदान गर्दछ; जे होस्, तपाईंको कभरेज सुरु नभएसम्म तपाईंसँग प्रतीक्षा अवधि हुन सक्छ।
केहि प्रकारका बीमाले मातृत्व सुविधाहरू प्रदान गर्न सक्दैनन्। तपाईं यस्तो आमाबाबुको रूपमा पुरानो 26 वर्ष मुनिका छन् र अर्को व्यक्तिको योजना, मा निर्भर कवरेज छ भने, वा विद्यार्थी स्वास्थ्य योजना छ, यो गर्भावस्था कवरेज समावेश हुन सक्छ। कानून-राज्य-देखि-राज्य फरक-फरक आफ्नो योजना संग जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्। यदि कभरेज समावेश गरिएको छैन भने, गर्भवती हुने माध्यम बाट आफ्नै योजनाको लागि आवेदन दिन विचार गर्नुहोस् स्वास्थ्य सेवा बजार, वा मेडिकेड कभरेजको लागि (जुन कहिलेकाँही राम्रो कभरेज प्रस्ताव गर्दछ)।
बीमा कम्पनीहरु एक अपेक्षा प्रसूति लागत, तपाईंले भुक्तानी गर्न आशा गर्न सक्छौं के तिनीहरूले कवर र के को एक राम्रो विचार दिनेछु जो संग प्रदान गर्न सक्षम हुनुपर्छ, यसोMelanie Musson, एक स्वास्थ्य बीमा विशेषज्ञ संग संयुक्त राज्य बीमा एजेन्टहरू । किनभने बच्चा भइरहेको महंगा छ एक कम deductible र कम अधिकतम बाहिर-को-खल्ती भएको बीमा नीति गर्भावस्था लागि सबै भन्दा राम्रो छ, र तपाईं संभावना आफ्नो deductible पुग्नेछ, त्यो भन्छन्।
गर्भावस्था र नवजात हेरचाहको लागि स्वास्थ्य बीमाको अतिरिक्त, तपाईंले आफूलाई आफूलाई परिचित गर्नुपर्दछ योसँग पारिवारिक मेडिकल लीभ ऐन वा FMLA। एफएमएलए अन्तर्गत, रोजगारदाताहरूले योग्य कामदारहरूलाई रोजगारीबाट सुरक्षित राख्नुपर्दछ र निश्चित मेडिकल र पारिवारिक कारणहरूको लागि अवैतनिक छुट्टी प्रदान गर्नुपर्दछ, जस्तै गर्भावस्था र नवजात शिशुको स्याहार, र छुट्टीको समयमा सामूहिक स्वास्थ्य लाभहरू कायम राख्न। यसले नयाँ आमाबुबालाई काम र पारिवारिक जिम्मेवारी सन्तुलन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यदि योग्य छ भने, तपाईले नवजात शिशुको जन्म र हेरचाहको लागी प्रत्येक हप्ताको १२ हप्ता सम्म भुक्तान बिदा लिन सक्नुहुनेछ, अन्य परिवार र मेडिकल कारणहरुका बीचमा।
यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने के तपाई स्वास्थ्य बीमा लिन सक्नुहुन्छ?
हो, तपाईं स्वास्थ्य बीमाको लागि आवेदन दिन योग्य हुनुहुन्छ यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ। विगतमा, बीमा योजना गर्भावस्था एक पूर्व अवस्थित अवस्था को रूप मा वर्गीकृत। यसले स्वास्थ्य बीमा बिना धेरै गर्भवती महिलाहरूलाई छोडिदियो।
तर ACA को पारित सबै परिवर्तन भयो। यदि तपाईंसँग बजार योजना वा मेडिकेड कभरेज छ भने, तपाईं गर्भवती भएको बेलामा पनि आवेदन गर्नुभयो भने पनि तपाईं गर्भावस्था र मातृत्व हेरचाह प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ। यो पनि तपाइँको नियोक्ता वा एक पार्टनरको नियोक्ता मार्फत बीमा कभरेज र एक स्वास्थ्य योजना तपाईं आफैले खरीद।
तपाईंले खुला एनरोलमेन्टको बखत वा विशेष नामांकन अवधिको अवधिमा स्वास्थ्य योजनामा ​​भर्ना हुन आवश्यक छ यदि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने। यस अनुसार स्वास्थ्य सेवा , एक विशेष नामांकन अवधि वार्षिक बाहिर एक समय हो खुला नामांकन अवधि यदि तपाईं जीवनको केहि घटनाहरू जस्तै चाल, विवाह गर्ने, स्वास्थ्य कभरेज गुमाउने, बच्चा जन्माउने, वा बच्चा जन्माउने अनुभव भोग्नुभएको छ भनेका लागि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ।
जब सम्म तपाईं एसीए अनुरूप स्वास्थ्य योजनाको लागि आवेदन दिनुहुन्छ, नोरिस भन्छन् कि तपाईंलाई जन्मपूर्व हेरचाहको लागि स्वास्थ्य कभरेजबाट वञ्चित गरिने छैन। तथापि, उनले तपाईंलाई अल्पकालीन योजना जस्तै केहि वा निश्चित क्षतिपूर्ति योजना लागि आवेदन हुनुहुन्छ भने कि दर्शाउन गर्छ, बीमा कम्पनी कारण एक गर्भावस्था गर्न आवेदन अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। छोटो अवधि का स्वास्थ्य योजनाहरु ACA दिशानिर्देश पूरा गर्दैन, र अधिक मात्र डाक्टर भ्रमण र आपतकालीन देखभाल कभर। छोटो अवधि का स्वास्थ्य योजनाहरु पूर्व अवस्थित सर्तहरु कभर छैन।
यदि तपाईं मेडिकेड कभरेजको लागि योग्य हुन धेरै कमाउनु भयो भने, केहि राज्यहरूले यस अन्तर्गत गर्भावस्थालाई कभर गर्दछ बच्चाहरूको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (CHIP) यो कार्यक्रम बीमा छैन जो बच्चाहरु को बीमा लाभ प्रदान गर्न को लागी राम्रो गरीन्छ।
तपाईं कसरी गर्भावस्था को लागत कम गर्न सक्नुहुन्छ?
एकपटक तपाईंले खुला भर्ना अवधिमा बीमा वा परिवर्तन योजना लागि योग्य कसरी बुझ्न, को fullest आफ्नो बीमा प्रयोग गरेर गर्भावस्था लागत कम गर्ने उपायहरू मा एक नजर यो समय।
खुला नामांकन अवधिको अवधिमा स्वास्थ्य बीमा योजनाहरू तुलना गर्नुहोस्
योजना छनौट गर्न सुरु गर्नको लागि राम्रो स्थान भनेको मासिक प्रीमियमको साथै गर्भावस्थाको लागि खर्च गर्नुहुने अपेक्षा गरिएको जेब खर्च सहित खुला नामांकनको क्रममा प्रत्येक उपलब्ध योजना अन्तर्गत अपेक्षित कुल लागतहरूको तुलना गर्नु हो।
कहिलेकाँही बढि-बाहिरको पकेट लागतको योजना कम प्रीमियमको कारण उत्तम मूल्यमा समाप्त हुन्छ, नोरिस भन्छन्, तर कहिलेकाँही तपाई कम प्रीमियम तिर्दै अगाडि आउँनुहुन्छ कम जेब लागतको साथ योजना प्राप्त गर्न।
यसलाई हेर्नको अर्को तरीका भनेको योजना छनौट गर्नु हो जुन कम कटौतीयोग्य हुन्छ सिक्सीरेन्स । प्रीमियमले यसलाई अफसेट गर्दछ, त्यसैले यो गणितलाई गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले अन्तिम वर्षको अन्तमा प्रीमियममा कटौती योग्य रकम सिक्साइनरमा कति भुक्तानी गर्नुहुन्छ भन्ने निर्णय गर्न।
तपाईंको बीमा नीति बुझ्नुहोस्
तपाईंको पहिलो पैसा बचत रणनीति तपाईंको बीमा कम्पनीलाई कल गर्नु हो। तिनीहरूले तपाईंलाई बताउन सक्नुहुन्छ प्रसूति हेरविचार लागि धेरै आफ्नो स्वास्थ्य योजना कवर, डाक्टर भ्रमणमा, वितरण लागत, सी-खण्ड कवरेज, नवजात हेरविचार र अन्य प्रक्रियाहरु सहित कसरी। , मा-नेटवर्क पद बाहिर-को-नेटवर्क लागत, अस्पताल बसाइ खर्च, coinsurance र बाहिर-को-खल्ती अधिकतम deductibles बारेमा सोध्न निश्चित गर्नुहोस्। र यदि तपाईं आफ्नो बीमा प्रदायकसँग खुला नामांकन अवधिको नजिक हुनुहुन्छ भने, समग्र लागत कम गर्न सहयोग गर्ने योजनाहरू परिवर्तन गर्ने बारेमा सोध्नुहोस्।
सम्भव भएसम्म नेटवर्कमा छनौट गर्नुहोस्
ओब्स्टेट्रिसियन पत्ता लगाउन, एउटा प्रदायक र अस्पताल खोज्नुहोस् जुन नेटवर्कमा छ। तपाईं आफ्नो बीमा प्रदायकको वेबसाइट पहुँच गरेर एक नेटवर्क प्रदायक पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। इन-नेटवर्क हेल्थकेयर प्रदायकहरूको प्रयोगले तपाईंलाई सम्भावित रूपमा धेरै पैसा बचाउन सक्दछ्। प्रदायक नेटवर्क आवश्यकताहरू र पहिले प्राधिकरण आवश्यकताहरूमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईंको obstetrician मा-नेटवर्क एक्सरे विशेषज्ञ, एनेस्थेसिओलोजिष्ट, प्रयोगशाला सेवा, वा अन्य सेवाहरू छ भने पनि नेटवर्क को बाहिर हुन सक्छ। तपाईं एक बाहिर-को-नेटवर्क अस्पताल गए वा बाहिर-को-नेटवर्क एनेस्थेसिओलोजिष्ट थियो किनभने एक आश्चर्य बिल संग अड्केको प्राप्त गर्न चाहँदैनन्, Norris भन्छन्।
एक FSA वा HSA को लागी साइन अप गर्नुहोस्
TO लचिलो खर्च खाता (FSA) र स्वास्थ्य बचत खाता (HSA) विशेष बचत उपकरणहरू हुन् जुन तपाईंले चिकित्सा हेरचाहको लागि जेबको खर्चहरूको लागि भुक्तान गर्न पैसा राख्नुहुन्छ। किनकि तपाईं यस पैसामा करहरू भुक्तान गर्नुहुन्न, तपाईं यी मध्ये कुनै एउटामा भर्ना भएर गर्भावस्थाको लागत कम गर्न सक्नुहुन्छ योजनाहरु ।
एक को लागि योग्य हुन FSA , तपाईको रोजगारदाताले योजना प्रस्ताव गर्नु पर्दछ। एचएसएको फाइदा लिन तपाईंसँग उच्च स्वास्थ्यकर योग्य स्वास्थ्य योजना हुनुपर्दछ, र तपाईं मेडिकेयर वा मेडिकेडमा हुन सक्नुहुन्न। यदि तपाईं एचएसए-क्वालिफाइड योजना छान्नुहुन्छ भने, तपाईं एचएसएमा प्रि-ट्याक्स पैसा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यो पैसा तपाईंको कटौतीयोग्य र अन्य गर्भावस्थामा सम्बन्धित जेब खर्च (वा अन्य स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताहरू) सम्बन्धित भुक्तान गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। , नोरिस भन्छन्।
अस्पताल बिलि department विभाग संग काम
अक्सर, अस्पताल बिलि departments विभागहरूले तुरुन्त भुक्तान गरिएको बिलहरूको लागि १०% देखि २०% छुट दिन्छ।मुसनव्याख्या गर्दछ। त्यसोभए, यदि तपाईं तत्काल भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ भने, बिलि department्ग विभागलाई कल गर्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि तपाईं छुटको लागि योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न।
तपाईंको अस्पताल छोटो र सरल रहनुहोस्
एक पटक तपाईंको डाक्टरले घर जाने हरियो बत्ती दिन्छ, र तपाईं तयार महसुस गर्नुहुन्छ, जति सक्दो चाँडो अस्पतालबाट जाँच गर्नुहोस्। साथै, तपाईं बाहिरका भेटहरूमा केहि सेवाहरू स्थगित गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ, जुन अधिक लागत प्रभावी हुन सक्छ जस्तै गैर-तत्काल विशेषज्ञ भ्रमणहरू वा गैर-तत्काल परीक्षणहरू (जस्तै एक्स-रे, अल्ट्रासाउन्डहरू, वा केही प्रयोगशालाहरू)। यो, अवश्य पनि तपाईको स्वास्थ्य लाभ र बच्चाको स्वास्थ्यमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं न्यूनतममा तपाईंको प्रवास राख्न सक्नुहुनेछ, तपाईं सम्भावित धेरै पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
Estriol vs. estradiol: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
अधिक वजन र मोटापा तथ्या .्क २०२१
फ्याँक्न को लागी कुन औषधि राम्रो छ
जहाँ तपाइँ एक नेबुलाइजर मिसिन किन्न सक्नुहुन्छ
योजना बी कति समय को लागी प्रभावकारी छ
vyvanse 50 mg कहिले सम्म यो अन्तिम हुन्छ